Choosing a Kitchen Pull out Faucet - Best Kitchen Faucets 2021 | Best Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Ukukhetha iKhitshi ukukhupha i-Faucet
2020 / 10 / 28 uhleloBlog 5642 0
Ikhitshi elikhupha itepu inokwakha kwi-squirt baton kunye nesicwangciso sangoku. Umbhobho wokurhuqa ngaphandle ususa i-wand yokuchitha eyenziweyo eqokelela amakhowa kwaye iphose kwimilomo yawo. Tsala iimpompo ithatha indawo yakudala yokuthumela ngaphandle kwaye zongeza ukubukeka okuthe tye kwaye okwangoku kuyo nayiphi na ikhitshi. Uninzi lwekhitshi kunye nenkampani yebhafu ngoku ithengisa ukukhupha iifompo kwaye ibabonelele kumzobo woyilo kunye neempawu, zibenze zifanele zonke iikhikhini kunye nekhaya. Uninzi lurhuqa amaxabiso eepompo ajikelezwe ngama-200 kunye nee-600 zeedola, kuxhomekeke kwisicwangciso nakwidayi, kwaye banokuseka kuninzi lokutya kwendlu, kubalwa indlu yokugcina kunye neLowes.
Xa ukhetha ikhitshi elikhupha itompu, kubalulekile ukuba ubuxabise ubungakanani besinki sakho. Kufuphi nomhlaba olele iisinki zifuna i-baton enokufika ixesha elide kwaye uya kuba nakho ukwenza isigqibo phakathi kwe-far arc ephezulu komhlaba., ithandwa kakhulu ngenxa yesicwangciso sayo sangoku, okanye itepu eqhelekileyo.
Ufuna ukwazi ukuba yeyiphi imodeli eya kuthi kunye nokuzimisela kungabinampilo kwisitya sakho sangoku sekhitshi, okanye, ukuba uthatha isigqibo ngefomet yakho ephambili, emva koko yenza into yokuba uyazi kakuhle ukuba yeyiphi imodeli oyikhethayo, ukuze uthathe isigqibo sokuntywila ngokuchanekileyo ukuya kubude nayo. Enye into yokucinga xa ukhetha ukutsala itompu yindlela itephu ehlala ngayo ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona. Ukomeleza okungenasiphelo kunye ne-chrome zezona zilula ukungcola simahla kuba zifile zibekelwe ukunkcenkceshela induna kunye nokungcola kunye nobunzima akunangxaki yokusula ngento. Ukomeleza okungenazingcingo kunye ne-chrome kuya kuhlala ngonaphakade, ngelixa ezinye izinto zigqibile zinokudika kwaye zifuna ukupholishwa.
Ukongeza kulindelo kuninzi loyilo olwahlukileyo, khupha iipompo zikwakhona kwisiphelo esingenakubalwa, nge-chrome kunye nokomelela okungagqwethiyo ekubeni sesona sininzi sithandekayo kwaye sinobunewunewu obuncinci. I-Chrome kunye nemodeli yokomeleza engenazingci zongezekile nzima kunezinye- ziyaphuka kwaye ziyaphikisana kwaye zicoceke ngakumbi kunenye ukugqitywa ngenxa yendawo ethe tyaba.
Umbala owongezelelweyo uhlikihla ubhedu, ubhedu, isilivere, ubhedu, i-satel nickel, emnyama emnyama kunye ne-pallid, kunye nokongezwa. Khetha oluchanekileyo luza esiphelweni ekhitshini lakho lokukhupha ivelufa ikakhulu kuswelekile kwisicwangciso nakwinkqubo yemibala ekhitshini lakho. Uninzi loluntu luthatha isigqibo sokuba lufike esiphelweni ngokokusebenza kwekhitshi, ngechrome kunye nentsimbi engenasici ehambelana nefriji yentsimbi engenasici, izitovu, kunye nezitya zokuhlamba izitya, kunye nezinye izinto ezinje ngobhedu kunye nokudityaniswa kwemithambo-luvo kunye neekhitshi ezindala kakhulu ezineethoni enesithunzi.
Ukuthengela ikhitshi ukukhupha ivalve kulula njengeseshoni ezantsi kunye noxanduva lokukhangela ngokukhawuleza kwi-Intanethi. Inkampani efana neKohler, i-More, kunye ne-Delta nganye ibeka ukuthengisa iifompu zabo kwi-intanethi. Omnye umthengisi okwi-Intanethi zii-Faucets. Ukuba unqwenela ukugcina ivenkile enkulu kwindawo yokuthengisa, ungafumana iimpompo eLowes nakwiNdlu yedepho. Bobabini aba bathengisi banokubonisa imikhosi efanelekileyo enokungafumaneki ukuba ubhatala imali nge-valve yakho ekwi-intanethi. Lindela ukuhlawula naphi na ukusuka kwi-200 ukuya kwi-600 yeedola; ngemodeli exabiso lisezantsi elinde i-chrome eqhelekileyo kunye nokomelela okungenasici Ndwendwela Ulwazi Oluthe kratya >>> https://www.wowowfaucet.com.
Ke uzimisele ukutshintsha ikhitshi lakho. Unqume kwikhabhinethi nakwi-countertop. Okwangoku lixesha lokukhetha itompu yesinki yekhitshi. Oku kushiya ukuba kube lukhetho olunzima ukukhetha eyona faucet yekhitshi ukuze ilungele umhombiso wakho.
Ngaphambili :: Layita isitayile ngeeMpompo zeKhitshi eliMnyama next: Ukuqondwa okungcono kweZitayile zeFace yaseKitchen
2021 / 09 / 25 2344
2021 / 09 / 25 4219
2021 / 09 / 24 2423
2021 / 09 / 24 2319